Umsuka wegama elithi "isikole". I etymology kwegama elithi "isikole"
Igama elithi "isikole" okuvame kangaka olimini lwethu kangangokuthi bambalwa abantu wazibuza lapho kufika izwi. "Isikole" - njengoba uphinyiswa ngesiRashiya, "skhole" - indlela ezwakala eGreece yasendulo, ngaphambi okuzelwe lapho. Nokho, ngokuhunyushwa ngokuhlukile kancane, "ukuhlaba ikhefu", "ezokungcebeleka" futhi "okuthuleyo", ngamanye amagama - ". Yokuchitha isizungu" I etymology kwegama elithi "isikole" Asho ukuthini lokhu akukona kumile ephelele futhi aziphumulele nokugcina ngesikhathi sakhe sokuphumula, ingxoxo ezihlakaniphile futhi uyafundisa - ubuciko Intandokazi zefilosofi. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi zo ongqondongqondo ayengabafundi beZwi njalo, kanye umqondo welithi "isikole" lasho inqubo yokufunda, futhi kamuva egumbini aguqulelwe kuye.
Amakilasi esikoleni ngesikhathi sokugcina akuyona okuningi ezahlukene kusukela sanamuhla. Ngokwemvelo, isikhathi umehluko kwabangela izinguquko, kodwa isimiso kufana ubuhlungu ajwayelekile kithi: abafundi abangalawuleki efanayo, abafundisi esiqinile futhi izifundo isidina.
Inqubo yokufunda kwenzeka ngisho nangaphambi ngesikhathi izigaba zokuqala lokuthuthukiswa kwabantu, ukuze sikwazi ngokuthi izikole uqala ukuvela phakathi naleso sikhathi. Lisho ukuthini igama elithi "isikole" e Yezwe Lasendulo eyenziwa incazelo ehlukile: abantwana abafundiswa ukufunda nokubhala (namanje zazingekho), kanye nekhono siqhubeke siphila kuleli zwe ngaphandle. Ikhono azingele karate babe sezifundo ezibaluleke kakhulu abafana. Girls, kanye ngazo zonke izikhathi, yingcweti ukulima, ngenalithi, ukupheka. Nokho, lapho ngaphandle luhlolo? Yiqiniso babengabakho, kodwa sasingababonayo amandla uvivinyo olukhulu, okubizwa ngokuthi "lokukhula ndima". Nsizwa ukuhlola amandla nokubekezela angase ahlukunyezwe umlilo, ukushaya, usike isikhumba, okuyinto cishe njalo kubange lutho ingane. Ukugcwaliswa ngempumelelo kwezinyathelo lokhu ukuhlolwa kwaba ukuqhosha womfana njengoba yaba ilungu egcwele umphakathi omdala.
Sumerians: isizwe abafunde kakhulu
Ilondolozwe Kahle ukwaziswa okuthakazelisayo kakhulu ezikoleni nesi - wemiphakathi ephucuke kuqala. "INdlu amaphilisi" - ngakho imfundo sabantu, lapho iminyaka 3000 BC. e. yingcweti ubuciko zobumba, skilfully sinisele Amasimu, ihlanganisa, ukuphotha, amathuluzi zethusi zethusi ekwakheni.
Sumerians ngobuciko ngabhala nenkondlo, umculo namaculo, kwadingeka ngolimi lwabo ebhaliwe, wayazi ukufunda izinkanyezi, algebra ephethwe imithetho main (ukuphindaphinda, ukuhlukanisa, ngisho nokususwa kusukela isibalo impande square). Kuyinto lezi zikole wakhala impilo yezinsizwa, abangena kamuva baba abaholi.
Kunzima kakhulu abafundi laseGibithe, ngokuba inqubo yokufunda kwaba eziyinkimbinkimbi: Bengifuna nje ukwazi ukuthi izinhlamvu ezingaphezu kuka 700, ombhalo wawo esedinga ukunakekelwa okukhulu.
Into ebalulekile cwaningo trehhvostaya isiswebhu elele ezinyaweni uthisha. Abafundi nsuku zonke esikoleni uqalise nge izinkondlo yokufunda, ukuphinda izindinyana eside ngokuzwakalayo ukuze uthisha, ababe besaba khulula ukubatshela ekupheleni kosuku.
Kanjani ukuze ufunde amaGreki asendulo
EGrisi lasendulo ke ngavunyelwa ukuya ekilasini esikoleni kuphela abafana kusukela nemikhaya ecebile - amadodana izigqila yayingekho indawo, ngakho kwadingeka ziqale ukusebenza zisencane. Amantombazane kuthiwa anikwa ikhaya safundiswa, ngaphansi kokunakekela umama, futhi kahle isayensi ukuthi kungaba wusizo kubo ekuphileni komkhaya esizayo: ezomnotho, umculo, yezandla, ukweluka, futhi-ke, kufundza nekubhala. Isifundo esikoleni yakhokhwa. Futhi ngenxa yokuthi i-Athene, njengazo zonke slaveholders, edelelekile ukusebenzela abantu imali, nothisha ahlonishwayo emphakathini akazange ayisebenzise. Meaning of izwi "isikole" elalihambisana nathishela, futhi kungakho indlela abampofu zokuphila ehola. Uma kwabanye indoda isikhathi eside ziye kwabikwa ukuthi badukile, abangane bakhe bathi lokugcina noma afe, noma ube uthisha. khona Dabukisa ngisho wamvumela ukuba enze ngokwayo wazizwa.
Abafana nasesikoleni kusukela kwabaneminyaka engamashumi 7 ubudala futhi ngaso sonke isikhathi sihambisana uthisha-isigqila, ukuba nginakekele ingane wazala izinto zakhe esikoleni. Isifundo esiyinhloko uloba, ukufunda kanye bill. Sekuyisikhathi eside endaweni azalelwa kuyo izwi "isikole".
Ukufunda ukufunda izinkondlo Homer sika - ". Odyssey" "The Iliad" futhi Ngaphezu kokuthola ulwazi olwengeziwe ku-geography, ingane Ukusetha i isibindi isibonelo futhi siqine heroes isebenza ulwe nobunzima.
I-invoyisi tibonwa babe amatshe nokunye ibhodi obukhethekile ekhonjiswe ke udlala izinombolo: imivo, amashumi namakhulu.
Incwadi yokuqala wahlanganyela phezu Amabhodi izinkuni embozwe wax, futhi kamuva - kuyi-papyrus. I kwandulela isitayela yesimanje isibambo kwaba - metal okhethekile noma ithambo induku, ngensimbi kolunye.
Ngokukhethekile sakhokhwa umculo kuyingxenye ebalulekile yokuphila yamaGreki. Njalo umfana wafunda ngicule ngidlale ngomtshingo noma olunezintambo.
Futhi, abafundi ukwenza ngenkuthalo yokuzijwayeza, kunikeza ukuvumelana umzimba, ukushintsha-shintsha - Greece kuye isizwe enempilo idinga.
Ngokungafani izikole yesimanje (lapho Umsuka wegama elithi "isikole" unesithakazelo iphesenti elincane labafundi) ezikoleni ngesikhathi sokugcina othisha jezisa izingane zokungalaleli ukusebenza academic abampofu. Kuze kube yimanje, kwakukhona ngenduku futhi ephethe isiswebhu.
Esikoleni yaphela amakilasi iminyaka engu-16. Izingane abazali abadla izambane likapondo akwazi ukuqhubeka nemfundo yabo eminye iminyaka engu-2.
1 Septhemba - Suku Ulwazi
Umlando igama elithi "isikole" njalo ahlotshaniswa nosuku ka-September 1 - esinye isinyathelo esibalulekile nge sezimbali izimbali, uhlangana nabangani, futhi ekuhambeleni kokuqala. Kungani kukhethwa wawa ngalolu suku ngoba kuqale unyaka esikoleni? Uma Umsuka wegama elithi "isikole" lihlotshaniswa ngezikhwepha yaseGrisi yasendulo, umsunguli isiko ekwindla kuyinto wayiyisa eByzantium, kwakusho ukuqala kwe-1 Septhemba iNkosi of Creation. Kuyinto ngenxa yale njongo nenombolo umsebenzi ensimini, eye abathintekayo, futhi abadala nabasha. Grand Prince Ivan III ngasekupheleni xv leminyaka, yamemezela ngo-September 1, ukuqala isikhathi kufike uNyaka Omusha (aka, Ekuqaleni Indiction) futhi isonto-isimo iholide. Ngokukhamba kwesikhathi, ngaphasi esinqumweni Petra Velikogo, uNcibijane washukumiseleka ukuba zonke evamile-January 1, futhi isonto futhi ikhalenda wezolimo oshiywe ingashintshiwe ngenxa yokuboshwa umsebenzi ngesikhathi sokuvuna wezolimo.
iminyango-September 1 esikoleni evulekile emazweni anjenge eCzech Republic, Ukraine, eBelarus, emazweni aseBaltic. Ngo kweJalimane neSpain Kuzo zonke izifunda emnyakeni lekufundvwa ngawo incike isikhathi sokuvuna kanye ekuqaleni kungakadluli 1 Okthoba. E-Italy, le usuku ukuqala ukuqala amakilasi. izingane Danish ukuya esikoleni maphakathi no-Agasti, futhi amaNgisi, abaseCanada nabaseMelika - ngoLwesibili wokuqala September. I etymology kwegama elithi "isikole" ihlanganisa zonke amazwe, ngisho eJapane, ukuthumela asemasha ukuba bathole ulwazi ngezi 1 Sihlabantangana.
Meaning of izwi "isikole"
Ngo yolimi lwanamuhla Russian igama elithi "isikole" kunikezwa ukubaluleka kakhulu kunalokho esingase ozijwayele. Ngakho, imiqondofana izwi "isikole" ungakwazi sithathe, ukwazi incazelo yalo egcwele ngaphandle umzamo. Ziyakwazi:
izikhungo zemfundo (aphansi nezamabanga aphakeme, esikoleni esiphakeme);
izikole eziningana ezikhethekile (umculo, emidlalweni yesikole yezingane);
Isimiso semfundo wonkana;
ukuqeqeshwa, isipiliyoni ungcolisa (esikoleni philological, isikole zokuphila);
isiqondiso setepolitiki, ezesayensi kanye ubuciko (eMoscow neziLimi School, School of Contemporary Art);
nursery ezikhulayo izitshalo.
Kususelwa izincazelo ngenhla, kungenzeka eyolanda imiqondofana izwi "isikole". Lena - esikoleni, ekolishi, esikoleni esiphakeme, nursery, Film School, ukukhalipha esikoleni, boarding school, ukufaneleka, isitayela, ekilasini, futhi eziningi podkovannost amagama amaningi.
School: impande kanye seligama
Kuyakuba khona impande igama elithi "isikole" isisekelo lezi okunye, "umfundi", "ntombazana yesikole", "isikole": "shkolnichat" "wesikole". Phela, igama elithi "shkolnichat" Kuyaqondakala ngokuthi "ukuzixakekisa", "kobuntwana", okungukuthi, ukuba ahole efana wesikole. "Yesikole" libhekisela namaqhinga eziyizici umfundi, ingane. esetshenziswa Ngaphambili igama elithi "isazi", e nombono oyiphutha, lathathwa ulimi Ukraine futhi akusebenzi namuhla. Eqinisweni, it has izimpande Polish ( «szkolarz» - ngakho-ke kulotshiwe nabasePoland). Kusukela igama elithi "isazi" kukhona okunye - "shkolyarstvo" futhi "wesikole", ukubaluleka okuyinto ngolimi Ukraine has kokubili umuzwa emihle nemibi, futhi imele:
sihlangene ukuze "isazi";
ulandele bakudala, imithetho bagomele, amaphethini, indlela olungenakuzisiza yomfundi noma yini.
ukunganakwa ngabanye. Lokhu kungabonakala nasemkhakheni imisebenzi abalobi abaningi Russian.
Ngokwe incazelo ngu Dahl, "shkolyarstvo" lichazwa ngokuthi sokuprakthiza ezomile futhi zomile futhi pedantry, laqonda kulandela samukelwa, imithetho ngokuvamile ziyashaqisa, ithi kumele eziyize.
Umsuka wegama elithi "isikole" inguqulo Ya Kamensky
Kukhona enye inguqulo ye Umsuka wegama elithi "isikole", esakhiwa izifinyezo, okuyinto yasungulwa uthisha Czech futhi sazi J. Kamensky (1562-1670). Wakha umqondo ezithile imfundo ngolimi umama, wanika igama lakhe lingabi izinhlamvu zokuqala isiqubulo olimini Russian kuzwakala "umqondo ohlakaniphile, senzo esihle, yakwazi nokukhuluma."
Umlando amanye amagama
Njengoba umlando igama elithi "esikoleni," wahosha ukunakwa umsuka amazwi ahlobene.
Portfolio. It has izimpande French futhi libe izingxenye ezimbili: "Imbobo" ( "sithwale") futhi "fel" ( "iphepha").
Notebook. Ivela "tetradion" ngesiGreki, elisho ukuthi "eligoqiwe izingxenye ezine." Lena indlela amaGreki enza ezikhathini zasendulo, izinto zokubhalela Ukuthunga ye-lula amahlamvu 4.
Iholide. izwi Izintandokazi bonke abafundi e nezwi livela eLatin kusho "umdlwane". Lapho Kuhlobana kanjani? "Ukuhlaba Ikhefu" (umdlwane), amaRoma ayibiza ngokuthi inkanyezi Sirius, njengoba bekholwa - inja yokuzingela ukudoba Orion. Uma ubona esibhakabhakeni Sirius eRoma kwafika ehlobo kushisa bhé, wamemezela ikhefu kuzo zonke amakilasi, futhi okwakubizwa ngokuthi "iholidi."
Izibonelo aphorisms nemisho ngegama elithi "inkawu"
Khetha amanzi heater ngokuba efulethini
Maxim Gorky "Old Isergil": Isifinyezo semisebenzi efundisayo
"Cossacks 3": ukubuyekeza yomdlalo. Ukubuyekeza, izidingo kanye namathiphu